nepse up(nepse up) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबारदेखि बढ्न थालेको बजारमा मंगबलार उछाल आएको छ । आइतबारदेखि दोहोरो अंकले बढिरहेको बजारमा यो दिन १.६९ प्रतिशतको उछाल आएको हो । यो नेप्से परिसूचक २५.१४ प्रतिशतले वृद्धि भई १५१६.०२ अंकको उचाईमा पुुगेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु एकाएक चम्किँदा बजार हराभरा भएको हो । जलविद्युत र उत्पादनमूलक...
काठमाण्डौ । तिहारपछि खुलेको बजारमा उत्साह देखिएको छ । तिहार विदा सकेर सबै लगानीकर्ता बजारमा आइनसकेको अवस्थामा समेत नेप्से परिसूचक ३.५७ अंकले बढेको छ भने कारोबार रकम पनि सन्तोषजनक विन्दूमै छ । चुनाव नहुने अन्यौल हटेर उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको अवस्थामा राजनीतिले आगामी दिनमा बजारको वृद्धिलाई थप टेवा दिनेछ । विश्लेषकहरुले बजारमा...
बजारमा हुँदैछ शुभै-शुभ, अब सुरु होला त उकालो यात्रा ?
काठमाण्डौ । विगत केही दिनदेखि पूँजीबजारमा शुुभ संकेतहरु देखिन थालेका छन् । ठूला लगानीकर्ता पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहँदा समेत साना लगानीकर्ताहरुको जोडबलले बजार परिसूचक झिनो नै भए पनि बढिरहेको छ भने कारोबारले समेत बजारलाई स्वर्णिम काल(बढोत्तरीको समय)तर्फ डोहोर्याउँदै लग्न थालेको प्रतीत हुन्छ । धेरै विश्लेषकहरुले बजारले हरेक दिन...
बजारको सुखद भविष्यका लागि शुभसंकेत !
काठमाण्डौ । निरन्तर गिरावटको तिक्तता व्यहोर्दै आएको बजार मंगलबारको यात्रालाई पछ्याउँदै बुधबार समेत बढेको छ । मंगलबारको झै बुधबार पनि बजार परिसूचक झिनो अंकले बढ्यो भने कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ । मंगलबार र बुधबारको बजारको प्रदर्शन हेर्ने हो भने परिसूचकमा झिनो बढोत्तरीसँगै कारोबार रकममा पनि सामान्य बढोत्तरी देखिन्छ । बजार...
दशैंविदापछि बजारमा उत्साह, अझै बढ्ने विश्लेषकको दाबी
काठमाण्डौ । दशैंविदापछि खुलेको बजार हराभरा हुँदा लगानीकर्तामा उत्साहको संचार भएको छ । धेरै लगानीकर्ता काठमाण्डौ नफर्किसकेको र कतिपयको दशैं नसकिएको अवस्थामा समेत थोरै लगानीकर्ताको सहभागितामा भएको कारोबारमा बजार हराभरा भएपछि बजार बढ्ने आशालाई थप बलियो बनाइदिएको छ । सामान्य अवस्थामा समेत आगामी दिनमा बजार अझ माथि जाने आँकलनलाई...
नेप्सेको चङ्गा अझ माथि, लगानीकर्तामा उमङ्ग !
काठमाण्डौ । मंगलबार सेयर बजार दशैंमय भएको छ । सोमबारदेखि बढ्न थालेको बजारमा मंगलबार परिसूचकको चंगा उडेर अझ माथि उडेको छ भने कारोबारको चंगा समेत माथि उचालिएको छ । परिसूचक र कारोबार दुवैको चंगा अझ माथि उड्दै जाँदा लगानीकर्तामा दशैंको उमङ्ग र उत्साह छाएको देखिएको छ । अन्य वर्ष दशैंविदाअघि बजारमा यस्तो उत्साह हुन्थेन । यो पटक थोरै...
यी हुन् दशैंको मुखमा कमाउने र गुमाउने कम्पनी !
काठमाण्डौ । थोरै लगानीकर्ता भए पनि खरीदको चाप बढेका कारण सोमबार नेप्से परिसूचक उकालो लागेको छ । नेप्से परिसूचक ८.५२ अंकले बढे पनि कारोबार रकम चाहि घटेर २८ करोडको हाराहारीमा आइपुुगेको छ । परिसूचक बढेर कारोबार रकम घट्नुले बजारमा थोरै संख्यामा सक्रिय रहेका लगानीकर्ताले खरिदारी बढाएका बुझिन्छ । बजारमा बिक्रीको तुलनामा खरीदको चाप बढ्दा...
तराईमा घाम लाग्दा बजारको बादल फाट्यो !
काठमाण्डौ । तराईको बाढी तथा डूूबान हटी घाम लाग्दै गर्दा बजारमा लागेको बादल समेत फाट्न थालेको छ । तराई मधेशको बाढी तथा डूूबानको छायाँले बादलले ढाकिएको बजारको आकाश बुधबारदेखि खुल्न थालेको हो । यो दिन नेप्से परिसूचकमा ३.५ अंकको सुधार देखिएको छ । यो सुधारसँगै नेप्से परिसूचक १६३२.६६ अंकको उचाईमा फर्किएको छ । बजारमा ७० करोडको मात्र कारोबार...
बुर्कुसी मार्यो बजारले, देखियो शुभै शुभ संकेत
काठमाण्डौ । साताको अन्तिम कारोबार दिन बजारमा एकाएक उछाल आएको छ । लामो समयदेखि गिरावट भइरहेको बजारमा बिहीबार एकाएक ३१.०५ अंकको उछाल देखिएको हो । बजारलाई बढी प्रभावित पार्ने बिमा समूहको परिसूचकमा निकै ठूलो उछाल देखिएको छ । यो समूहको परिसूचक ३.९६ प्रतिशत(३१९.९ अंक)ले वृद्धि भएको छ । परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि उस्तै उछाल आएको छ । कारोबार...
यसकारण हराभरा भो बजार
काठमाण्डौ । तीनवटा प्रदेशमा असार १४ मै निर्वाचन हुने निश्चित भएपछि त्यसको प्रभावले बजार हराभरा भएको छ । सुरुमा घट्दो क्रममा रहेको बजार सत्तारुढ घटकको तीनवटा प्रदेशमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने सु निश्चितताले अन्तिम अवस्थामा ५.१ अंकले बढी १५८९.५९ अंकको उचाईमा फर्किएको छ । साताको अन्तिम कारोबार दिन अन्य समूह २.८९ अंकले घटे पनि बाँकी...
१५ सयको स्तरमै अड्कियो नेप्से, देखियो शुभ संकेत !
काठमाण्डौ । मंगलबार बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेप्से परिसूचक ४.६३ अंकले वृद्धि हुँदा कारोबार चाहि ४९ करोडमा समेटिएको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५० प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणले बजारमा सामान्य प्रभाव पारेको देखिन्छ । मार्केट मेकर मानिएको एभरेष्ट बैंकको बुक क्लोजको खबरले समेत बजार प्रभावित भएको देखिएको छ । समग्रमा...
बजारमा चल्दैछ नपत्याउँदा कम्पनीको राज !
काठमाण्डौ । मंगलबार झै बुधबार पनि बजारमा हरियाली छाएको छ । बजार परिसूचकमा सामान्य वृद्धि हुँदा कारोबार रकम भने केही घटेको छ । बजारमा सामान्य अंकको घटबढ भइरहँदा समेत कतिपय नपत्याउँदा र साना कम्पनीका लगानीकर्ता चाहि मालामाल भइरहेका छन् । विगत केही दिनदेखि बोटसर्ल नेपाल(तराई) लिमीटेड, हिमालयन डिस्टीलरीका लगानीकर्ताले प्रत्येक दिनजसो...
इण्डेक्स र टर्नओभर एकसाथ बढ्यो, शुभ संकेत !
काठमाण्डौ । सोमबारको निरश बजारले एकाएक फड्को मारेपछि मंगलबार हरियाली छाएको छ । नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अंकको बढोत्तरी भएको छ भने कारोबार रकमले पनि फड्को मारेको छ । नेप्से परिसूचक(इण्डेक्स) र कारोबार(टर्नओभर) समानान्तर ढंगले बढ्न थाल्नुु बजारका लागि सुखद संकेत हो । तर, यो क्रम केही दिनसम्म लगातार देखिए बजारमा उछाल आउने संभावना हुने...
आशा र आशंकामिश्रित बजार आगामी साता के होला ?
काठमाण्डौ । चुनावी सरगर्मीले देश तातेको बेला बजारलाई पनि बिस्तारै गति लिने छाट देखाएको छ । तथापि, सर्ट टर्म कारोबारी(छोटो समयका लागि कारोबार गर्ने व्यक्ति)ले प्रोफिट बुक गर्दै बिक्रीको चाप समेत बढाएपछि बजारमा कारोबार रकम समेत बढेको छ । नेप्से परिसूचकमा सामान्य बढोत्तरी हुँदा कारोबार रकम चाहि निकै धेरै बढ्नुुलाई बजारमा क्रेताको मात्र...
यसकारण बढ्यो बजार, भविष्यका लागि राम्रो संकेत
काठमाण्डौ । गिरावट र धेरै लामो समयसम्म स्थिर देखिएको बजार मंगलबार १३.५१ अंकले वृद्धि भएको छ । नेप्से परिसूचक(इण्डेक्स)सँगै कारोबार(टर्नओभर) पनि वृद्धि भएको छ । इण्डेक्स र टर्नओभर समानान्तर ढंगले बढ्नुलाई विश्लेषकहरुले बजारमा क्रय शक्ति बढेको मान्ने गर्छन । मंगलबारको बजारलाई पनि यही रुपमा लिने हो भने आगामी दिनका लागि यो कारोबार राम्रो...